कार्यक्रम युवा स्वरोजगार, विदेशमा पठाउन ३५ लाख खर्चेर भाषा सिकाउँदै प्रदेश सरकार ! - Gandak News
कार्यक्रम युवा स्वरोजगार, विदेशमा पठाउन ३५ लाख खर्चेर भाषा सिकाउँदै प्रदेश सरकार !
गण्डकन्यूज द्वारा १ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०९:५४ मा प्रकाशित
‘केही दिनमै भाषा कक्षा सुरु हुन्छन् । प्रदेश सरकारको रातो किताबमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले भने । बजेटमा समावेश गरिएका स्वरोजगार बन्न टेवा पुर्‍याउने कार्यक्रम भने आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । यो समाचार अfजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।